Ezona zityalo ziNdlu ziBalaseleyo ukuze zikhule ebushushwini- Ubushushu buyanyamezelana kwizityalo zangaphakathi - Izityalo
Ezona zityalo ziPhambili zeNdlu ukuze zikhule ngobushushu- Ubushushu buyanyamezelana kwizityalo zangaphakathi
Ihlobo lilapha, amaqondo obushushu ayenyuka, kwaye ubushushu busetelwe ukuqhubeka iveki yonke. Ngelixa uzama ukugcina indlu yakho ipholile ebushushwini, indawo enye onokuthi uqokelelwe kuyo zizindlu zakho-emva kwayo yonke loo nto, bafuna inkathalo enkulu kunye noqwalaselo.
Ukuba unayo isetyu okanye Cacti ihleli kumda wefestile yefestile okanye kwishelufa, ke ungakhathazeki, kuba ziya kulunga ngokukhanya kwelanga.
Ukukunceda ukugcina uhlaza ekhaya ngexesha lasehlotyeni, Zenkcete.co.uk idale isikhokelo sokugqibela sezityalo ezikhula kakuhle ebushushwini kwaye ezinokumelana neenyanga ezishushu kakhulu zonyaka, ke ukuba awunayo enye yezi, yehla uye kwiziko elikufutshane lasegadini.
Akumangalisi ukuba ezi zityalo zinemibala zihamba ngoku, zinikwe ubuhle bazo kunye nolondolozo olungenamsebenzi. Nangona ii-succulents eziluhlaza zikulungele ngakumbi ukungena ngaphakathi kunokwahluka kwazo okuqaqambileyo, beka isityalo sakho kufutshane nefestile ethi ikhanyise imini yonke ukuze ichume! Kuba amagqabi ayo atyebileyo kwaye omelele egcina ukufuma, kufuneka uyinkcenkceshele kanye ngeveki, kwaye uya kuxolelwa emva kweeveki ezimbini zokungahoywa!
Ingcebiso ephezulu: Gcina isityalo sakho sikufutshane nefestile kangangoko.
Yukari Yamashita / EyeEmImifanekiso kaGetty
Sonke sinetyala lokungazikhathaleli izityalo zethu zangaphakathi, ngakumbi kumaqondo obushushu ashushu xa sinoxanduva lokuzihambisa. Ngethamsanqa kuthi, icacti iyakuxabisa ukukhanya kunye nendawo efudumeleyo, ukumelana ngqo nelanga kunye nokunkcenkceshelwa kanye ngenyanga kulungile. Kwaye kunye nokukhetha okuninzi kwiimilo kunye nobukhulu, yindlela elula yokujova okuluhlaza endlwini yakho ngaphandle koxinzelelo!
Ingcebiso ephezulu: Amanzi ngokuphakathi - kungcono ukuba ungaphantsi kwamanzi kunamanzi angaphezulu.
I-Blanchi RibImifanekiso kaGetty
3. IAloe Vera
Idume ngesakhono sokunyanga amanxeba, kuvela ukuba izityalo zekhala zinzima ngokwazo. Ngokufuthi ekubhekiswa kubo ‘njengesityalo sokungafi’ kulula ukubona ukuba elo gama lafunyanwa njani, njengoko benokuphila kuzo zonke iindlela zemo kwaye bafuna ingqwalaselo encinci. Shiya nje isityalo sakho kwilanga elithe ngqo, nkcenkceshela ngalo lonke ixesha kwaye uyakuba nealo vera!
Ingcebiso ephezulu: I-Aloe ithanda ukufuduselwa embizeni enkulu kanye kwiminyaka emibini ukuya kwemithathu.
Emilija ManevskaImifanekiso kaGetty
4. UMtyholi uIvy
I-Ivy kaMtyholi lukhetho oludumileyo lwezityalo zangaphakathi, zombini zomelele kwaye zintle. Cinga ulondolozo olusezantsi kwaye akukho bubudenge, okwaziyo ukuziqhelanisa nokukhula ngokukhanya okungangqalanga okuthe ngqo kunye nokukhanya okuphantsi. Isityalo sifuna ukunkcenkceshelwa manqaphanqapha, ngoko naxa amaqondo obushushu enyuka akukho mfuneko yakuzixakekisa ngokubuna. Amagqabi awo makhulu nawo ayahamba, ekhupha amanzi agqithisileyo emoyeni ukuzipholisa kunye nokusingqongileyo okukunceda ukufuma ekhayeni lakho.
Ingcebiso ephezulu: I-Devil's Ivy iyachuma xa uvumela umhlaba wabo wome phakathi kokunkcenkceshela.
5. IPonytail Palm (iDracaena)
Imithi yesundu ye-Ponytail ngokuqinisekileyo iyanceda ukuyila itropiki, ulwandle luve kwintuthuzelo yekhaya lakho. Kulula ukuhlala onwabile kwaye ufuna kancinci ingqalelo yakho ukuba ikhule kwaye ikhule, zizityalo ezifanelekileyo zangaphakathi. Umthonyama waseMexico uyonwaba xa egcoba kwindawo eqaqambileyo, enelanga nangona ekwazi ukuzivumelanisa ngokulula neemeko zokukhanya eziphantsi. Isitshixo kukuvumela umhlaba ukuba wome ngokupheleleyo phakathi kokunkcenkceshela.
Ingcebiso ephezulu: Lumkela amagqabi amthubi okanye isiqu se-mushy, oku kuthetha ukuba unamanzi amaninzi.
Ibali elinxulumene noko UOlivia Heath Umhleli oLawulayo weDijithali, iNdlu entle yaseUK U-Olivia Heath nguMhleli weDijithali oLawulayo kwiNdlu entle yase-UK apho uxakeke khona ekufumaniseni ezona ntsingiselo zekhaya zinkulu ngomso, zonke ngelixa ehambisa inkuthazo yegumbi elinesitayile, izisombululo zendawo encinci, izimvo ezilula zegadi kunye nokhenketho lwendlu kwezona ndawo zishushu kwimarike.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
izimvo zee-scout elves
Iingcamango zethayile yokuhlambela eluhlaza okwesibhakabhaka
imibala efanelekileyo kwigumbi lokutyela
igumbi elincinane lokutyela ukukhanya